I-iPhone 6 Yokubonisa Umhlangano We-Digitizer Ukushintshwa Kwesikrini Okumhlophe China Manufacturer
Incazelo:IPhone 6 I-Digitizer,IPhone 6 Yomhlangano Wokubonisa,I-iPhone 6 Ukushintshwa Kwesikrini
Home > Imikhiqizo > I-iPhone LCD Digitizer > I-iPhone 6 / 6Plus i-LCD Digitizer > I-iPhone 6 Yokubonisa Umhlangano We-Digitizer Ukushintshwa Kwesikrini Okumhlophe
I-iPhone 6 I-Digitizer Screen Replacement i-White Full Assembly I-LCD Display ngaphandle kwekhamera yasekhaya
Lona i-iPhone 6 (4.7 amasentimitha) Bonisa ingxenye Yomhlangano / Isikhundla Sokufaka Isikrini (i-LCD, i-digitizers, nephaneli langaphambili lonke lihlangene ndawonye). Lungisa i-iPhone yakho eyayilimaza / ephukile / ephukile / ephahliwe / engekho Eyodwa. I-iPhone 6 Display Assembly izohambisana kuphela ne-iPhone 6, kodwa hhayi i-iPhone 6 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus. Le ngxenye ifika nesiphakamiso se-iPhone 6, ikhamera ebheke phambili, nezintambo ezizihlanganisa nazo, okusho ukuthi awudingi ukudlulisela kusuka kusikrini sakho esidala kulesi sisha. Umsebenzi we-Touch ID uzosebenza kuphela ngomhlangano we-inkinobho yangempela yefoni yakho. Uzodinga ukudlulisela umhlangano webhokisi kusuka kusibonisi sakho esidala ukuze ugcine i-Touch ID.
Isikrini se-LCD ne-digitizer + ifreyimu + isikhulumi se-khamera + esibhekene naso esibhekene naso + inzwa yokusondeza i-flex + yamathuluzi wokulungisa isethi
Ukushintsha isikrini sakho esonakalisiwe, esiqhekekile, esingasebenzi, isikrini esihlakaziwe, noma izikrini ezinezinkinga zokubonisa noma zokuthinta.
Yethembise: 100% Ihlolwe yiqembu le-QC elisebenzayo, izinqubomgomo ezingu-12 zokubuyisela kanye newaranti. Sinesibopho nganoma yimuphi umonakalo ngesikhathi senkinga yokuthutha noma yekhwalithi. Thenga Ngokuqiniseka!
· I-LCD Screen bese uthinta i-digitizer ngaphandle kwenkinobho yasekhaya.
5.Kuphakanyiswa ukuthi kufanele uthathwe indawo yocwaningo lobuchwephesha, noma ubuke amavidiyo amfundo wokufundisa ukuthi ungayithatha kanjani isikrini se-iPhone 6.
3.Izixazululo: 1336 x 750 pixels, 326 ppi pixel
4. Usayizi weskrini: 4.7Amasentimitha
Izigaba zomkhiqizo : I-iPhone LCD Digitizer > I-iPhone 6 / 6Plus i-LCD Digitizer
I-iPhone 6 I-LCD Digitizer Khombisa ukushintshwa kweskrini sokuthinta Xhumana Nanje
I-iPhone 6 Plus 5.5 Inch LCD Display Screen Xhumana Nanje
I-iPhone 6 Yokubonisa Umhlangano We-Digitizer Ukushintshwa Kwesikrini Okumhlophe Xhumana Nanje
IPhone 6 I-Digitizer IPhone 6 Yomhlangano Wokubonisa I-iPhone 6 Ukushintshwa Kwesikrini IPhone X I-LCD Digitizer IPhone 7 ye-LCD Digitizer IPhone 6 Plus i-LCD Digitizer IPhone 6S Plus i-LCD Digitizer IPhone 7 Plus i-LCD Digitizer